Hello Nepal News » दोस्रोपटक युभेन्टस पुगेपछि मोराटाका चार भनाइ
इटालियन क्लब युभेन्टसले स्पेनिस एथ्लेटिको मड्रिडबाट लोनमा अनुबन्ध गरेका फरवार्ड अल्भारो मोराटालाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ । कोरोना भाइरसको असर कायमै रहेका बेला क्लबले स्पेनिस खेलाडीलाई भिडियोमार्फत् सार्वजनिक गरेको हो ।
युभेन्टसले २७ वर्षीय फरवार्डलाई एकवर्षे लोन सम्झौतामा अनुबन्ध गरेको हो । तर, एक सिजनपछि युभेन्टसले उनलाई स्थायी रूपमा स्थायी खेलाडी बनाउन चाहे ४५ मिलियन युरो तिर्नुपर्नेछ । साथै, लोनमै कायम राख्न चाहे ९ मिलियन तिर्नुपर्ने सर्त छ ।
मोराटोले दोस्रोपटक युभेन्टसमा खेल्न लागेका हुन् । उनले सन् २०१४ देखि २०१६ सम्म युभेन्टसबाट खेलेका थिए । त्यसबेला उनले ९३ खेल खेल्दै २७ गोल गरेका थिए ।
युभेन्टसको जर्सीमा दोस्रोपटक सार्वजनिक भएपछि मोराटाले मिडियासँग आफ्ना भनाइ राखेका छन् । उनले दोस्रोपटक क्लब आउन पाउँदा खुसी लागेको बताउँदै टिमलाई उपाधि जिताउन सकेसम्म धेरै योगदान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । मोराटाले राखेका चार प्रमुख भनाइ–
१. यहाँ आउँदा मलाई पुरानो घर आएजस्तै लागेको छ । म खुसी छु । युभेन्टसको जर्सीमा दोस्रोपटक खेल्न पाउँदा म उत्साहित छु । म टिमलाई जित्न र च्याम्पियन बनाउन आफ्ना तर्फबाट सघाउने छु । म आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शन दिन कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।
२. युभेन्टस विश्वको एक ठूलो क्लब हो । यहाँ विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडी छन् । युवा र प्रतिभावान् खेलाडी छन् । मलाई लाग्छ, मैले खेलेदेखि यता युभेन्टससँग यतिबेला सबैभन्दा ऊर्जावान् र गतिशील टिम छ । यो टिमले सबै कुरा जित्ने सामथ्र्य राख्छ । हामी मिलेर नयाँ सिजनमा नयाँ कुरा जित्नेछौं ।
३. पिर्लो (प्रमुख प्रशिक्षक आन्ड्रेया पिर्लो) ले मप्रति जुन विश्वास देखाएका छन्, त्यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु । हामीले विगतमा सहकर्मी बनेर खेलेका छौं । आज उनी मेरा प्रशिक्षक छन् । यो फरक र नयाँ परिवेश हामी दुवैका लागि हुनेछ । म उनको नेतृत्वमा खेल्न निकै उत्साहित छु ।
४. म यहाँ आउनुका पछि थुप्रै कारण र प्रेरणा छन् । त्यसमध्ये क्रिस्टियानो एक हुन् । हामीले रियल मड्रिडमा सँगै खेलिसकेका छौं । यहाँ दोस्रोपटक फरक टिममा हामी पुनः सँगै खेल्न गइरहेका छौं । यस कुरा म निकै उत्साहित छु । उनीजस्ता नेता र च्याम्पियन खेलाडीसँग फेरि पनि सहकर्मी बनेर खेल्न पाउँदा म आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु । तपाईंहरू पर्खनुहो्स र हेर्नुहोस्– हामी मिलेर धेरै कुरा जित्न गइरहेका छौं ।’
प्रकाशित मिति ७ आश्विन २०७७, बुधबार ०७:१५